आज मंगलबार, कस्तो छ तपाईँको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज मंगलबार, कस्तो छ तपाईँको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ...
आज मिति २०७६ साल साउन १४ गते मंगलबार । तदनुसार सन् २०१९ जुलाई ३० तारिख । शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, नेपाल संवत् ११३९ दिल्लागा, श्रावण कृष्णपक्ष, त्रयोदशी, १२ः३८ उप्रान्त चतुर्दशी तिथि ।
बोलीले काम बन्न्नेछ, पारिवारिक भेटघाट हुनेछ ।
वैदेशिक काम बन्नेछ, सामाजिक काममा व्यस्तता बढ्नेछ ।
घरमा विवाद हुनेछ, काममा खर्च हुनेछ ।
व्यापारमा लाभ हुनेछ । अरुको साथ पाइनेछ ।
विद्यामा प्रगति मिल्नेछ । व्यवसायमा फाइदा पाइनेछ।
सन्तानको माया मिल्नेछ, अध्ययनमा प्रगति हुनेछ।
काममा बाधा आउनेछ । शरिरमा विसञ्चो देखिनेछ।
दाम्पत्य सुख मिल्नेछ, मान सम्मान पाइनेछ।
आरोग्यता प्राप्ति हुनेछ, विरोधी पर जानेछन्।
यात्राको सुख मिल्नेछ, रमाइलोमा खर्च हुनेछ।
आर्थिक चिन्ता हुनेछ, काममा खर्च बढ्नेछ।
काममा जिम्मेवारी आउनेछ, यात्रा गर्नु पर्नेछ ।